Mabhuku ese naCamilla Läckberg | Zvazvino Zvinyorwa
Ese mabhuku naCamilla Läckberg
Muna 2003, munyori wechidiki weSweden akaburitsa bhuku rinonzi Ice Ice Princess iro raizopedzisira rave rinotengesa zvakanyanya. Makore gumi nematanhatu gare gare, Camilla Läckberg ave mucherechedzo we Tsamba dzeNordic uye zvinyorwa zvetikitivha, ari kumusha kwake, Fjällbacka, epicenter yenyaya dzese dzakatarisana nemupurisa Patrik Hedström uye munyori Erica Falck. Isu tinokuzivisa iwe ese mabhuku naCamilla Läckberg, ayo atengesa anopfuura makopi emamiriyoni makumi maviri nemashanu pasi rese.
1 Ese mabhuku naCamilla Läckberg
1.1 Chando mwanasikana wamambo
1.2 Kupopota kwekare
1.3 Vanasikana vechando
1.4 Rarama mhosva
1.5 Tsoka dzisingadzimiki
1.6 Mumvuri we siren
1.7 Varindi veimba yechiedza
1.8 Iko kutarisa kwengirozi
1.9 Shumba tamer
Chando mwanasikana wamambo
Iyo Ice Princess: ...
Runyorwa rwekutanga rwaLäckberg rwakaburitswa muna 2003 kuva nhamba 1 muSweden uye ichidudzirwa uye ichiburitswa muSpain muna 2006. Rimwe remabasa emunyori rinozivikanwa zvikuru rakapa guta risinganzwisisike reFjällbacka kuburikidza nekuzviuraya kwaAlexandra, mukadzi wechidiki ane shamwari yehudiki, munyori Erica Falck, anoziviswa nevabereki vake nezve ichangopfuura. akafa kuti kwaive kuuraya chaiko. Pamwe chete nemupurisa Patrik Hedström achaedza kugadzirisa nyaya yacho.
Ungada here kuverenga Chando mwanasikana wamambo?
Kuchema kwekare ...
Rakadhindwa muna 2004, runyorwa rwechipiri rwaLäckberg rwunounza zvakare protagonists eI Ice Princess, Erica Falck naPatrick Hedström, panguva ino pamwe chete uye vachitarisira mwana. Mamiriro ezvinhu akasarudzika anoshanduka kuve hope apo vaviri vacho pavanofunga kunogara muzhizha mutaundi reFjällbacka, uko mukomana achangowana mutumbi wemukadzi wechidiki pamwe neuyo wevamwe vasikana vaviri vakanyangarika mwedzi yapfuura, zvichimutsa nyowani nyowani inoenderera yakafanana uye muropa chirongwa chebasa remunyori weSweden kunyangwe panguva ino nyaya yacho yakanyanyisa kukanganiswa uye kumonyaniswa.
Lee Kupopota kwekare.
Vanasikana vechando ...
Nyaya dzaLäckberg dziri kuita, kukwevera muverengi pane yavo turf uye ichivaita vabatanidzwe kutsvaga kwemhondi iyo yatinoshuvira kuwana chero zvodii. Zvinhu zvakashandura basa remunyori uyu kuita chirauro chevadi ve mabhuku eutikitivha, kuva Vanasikana vechando rimwe remazita ake epamberi, panguva ino rakaburitswa muSweden muna 2005 uye kuSpain makore mana gare gare. Mune vanasikana vechando, ivo protagonists vatove vabereki, zvinowirirana nekuonekwa kwechitunha chaSara, mwanasikana weshamwari yaErica uyo akanyudzwa asati akandwa pasi pegungwa.
Rarama Mhosva: A ...
Mumazuva pamberi pemuchato waErica naPatrick, vaviri vakatsiga vane mwanasikana, Maja, ane mwedzi misere, meya weFjällbacka anozivisa kuuya kwevashandi veterevhizheni vanozotora iyo chaiyo inoratidza "Fucking Tanum", yakafanana naGran Brother . Kunyangwe kuyedza uku kuchivimbisa kuunza mabhenefiti mazhinji kuvanhu, kutora mafirimu kunoshanduka kuve gehena apo imwe yenhengo dzechirongwa ichi inoita kunge yakaurawa, zvichikonzera Patrick kuti aongorore nyaya iyi uye nekutya hupenyu hwemusikana wake mudiki.
Iwe hausati waverenga Rarama mhosva?
Mavara asingadzimiki: ...
Mushure mekupera kwezhizha, munyori Erica anodzokera kubasa rake rekushanda apo mumwe wake, Patrick, anoramba ari mukuchengetwa nemwanasikana wavo Maja kwechinguva. Kudzikama kwakaderedzwa zvakare apo chitunha chaErik Frankel, munyori wenhoroondo anozivikanwa weChipiri Hondo Yenyika, anoonekwa padyo neFjällbacka.
Lee Tsoka dzisingadzimiki.
Mumvuri we siren
Mumvuri we siren: ...
Yakabudiswa muSweden muna 2008, Mumvuri we siren count seye protagonist ane Fjällbacka Raibhurari Christian Thydell, uyo akabatwa noutsinye mushure mekuburitswa kwebhuku rake rekutanga, La sombra de la sirena. Ngano isinganzwisisike ine nhoroondo yemhuri isina kugadzikana uyo anotuka shamwari yake Magnus kuti afe pasi pechando, achivhura nyaya nyowani kuti iongororwe naErica naPatrik.
Varindi veimba yechiedza
Vatariri vechiedza ...
Icho chinhu chakajairika hachishayike mungano dzakavanzika dzaLäckberg, kuve Varindi veimba yechiedza chimwe chezvinhu zvinoshamisa kwazvo kupfuura zvese. Mubhuku, tinoziviswa kuna Erica atove nepamuviri pemapatya uye aine nguva shoma yekushanyira Annie, shamwari kubva kuchikoro chesekondari uyo asarudza kudzokera kuFjällbacka. Zano rinotanga kuomarara kana mhuri ichangosvika ichisarudza kutamira kuchitsuwa cheGraskar, ichigarwa nezvipoko zvekare, mweya wewaimbove musikana wake, Matte, ari iye ega Annie aanogona kuona paanoratidzika kunge akapondwa.
Iko kutarisa kwengirozi
Kutaridzika kweNgirozi ...
Mune ino nyowani nyowani ndechimwe chitsuwa, Valö, iyo epicenter inotenderedza zvakavanzika zvese zvechirongwa chitsva. Nzvimbo iyo vaviri vakaroorwa vakaumbwa naEbba naMårten vanosarudza kufamba mushure mekufa kwemwanakomana wavo mudiki uye papurazi rake mhuri yaEbba yakanyangarika makore makumi matatu apfuura nekuda kwemoto usina tsananguro kana kuferefetwa. Ebba, uyo anga aine gore rimwe chete paakawanikwa, anoenderera mberi achiwana zvishuwo zvebhavhadhe kubva kumutumwa asinganzwisisike ane chitupa chiri kutanga kuferefetwa naPatrik naErica.
Usapotsa Iko kutarisa kwengirozi.
Shumba tamer ...
Pakati paNdira, kunotonhora muFjälbacka, mukadzi asina kupfeka anomira pakati pemugwagwa kwaanomhanyiswa nemota. Mushure mekunge mutumbi wazivikanwa, zvinoonekwa kuti akabatwa akashaya mwedzi mina yapfuura uye, nekutonga nemaronda mazhinji uye mitezo yaanopfeka, akaurayiwa nemhondi yekusazivikanwa. Mhosva iyi, yakaferefetwa naPatrik, inoitika zvakafanana nekutevera mutambo wemhuri nemukadzi wake Erica.
Lee Shumba tamer.
Muroyi: Camilla ...
Runyorwa razvino rwaLäckberg Yakaburitswa munaKurume 1 munyika medu kuburikidza neMaeva yekutsikisa imba uye iri kutora nzvimbo zvakare munharaunda yeFjälbacka. Munyaya nyowani iyi, munyori anozvinyudza mukutsvaga kwevaroyi izvo zvinoramba zviripo muzana ramakumi maviri nemana uye izvo zvinotangazve mushure mekuonekwa kwechitunha chemusikana ane makore mana ekuberekwa. Chiitiko chematsotsi chakafanana neicho chakaitika makore makumi matatu apfuura, apo vechidiki vaviri vakapomerwa mhosva yekuponda kunyangwe vasina kukwanisa kusungwa nekuda kwekuva vadiki, vachionekazve apo humhondi hutsva uhu hwakaferefetwa naErica naPatrik.
Iwe hausati waverenga Muroyi naCamilla Läckberg?
Ungade here kuverenga mabhuku ese naCamilla Läckberg uye kunyengerwa nemukadzi mutema weSweden?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Ese mabhuku naCamilla Läckberg
Llera Pacios Chitoro Chemabhuku akadaro
MaSweden vane chipo chechisikigo chevanoongorora, zvechokwadi kurudziro yakanaka kwazvo.
Pindura Llera Pacios Bookstore
Ini ndinoda mabhuku ake, munyori wangu wandinofarira ...
Genina Glenda Giliberto akadaro
Ndakaverenga angangoita ese mabhuku aCamilla; Iyo yakasvika pamoyo wangu zvakanyanya ndeiyi: Imborrable tsoka. Makorokoto kune akadaro akanaka munyori, uyo anoita kuti isu kuseka, kuchema uye kwete kukanganwa zvakapfuura.
Pindura kuna Genina Glenda Giliberto
4 edhiyo nhau dzemwedzi wechina wegore
Kubvumbi, mwedzi wemabhuku. Ndezvipi, zvinorevei. 30 pfungwa